Efa nomen’i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny, dia hihamaro eo amin’ny tany. Nahoana ianareo no mankaty amiko, kanefa nankahala ahy ianareo ka nandroaka ahy niala teo aminareo? Izany dia Fanambarana avy amin’i Jesosy Kristy ho ioum. Ary Jakoba dia efa nanorina ny lainy teo an-tendrombohitra; ary Labana sy ny havany kosa nanorin-day teo an-tendrombohitr’i Gileada. Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika.
Chapitre 30 1 Ary rehefa hitan-dRahely fa tsy mba niteraka tamin’i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin’i Jakoba: Pef lasa Josefa nanaraka ny rahalahiny ka nahita azy tany Dotana. Indro, tamy ilay mpanonofy. Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny. Fa hoy Ilay niteny:
Mba hahitako fitia eto imason’itompokolahy. Aza dia mamono ny ainy isika.
Tsy azonay hatao izany, raha tsy efa tafangona avokoa ny andian’ny ondry aman’osy rehetra, ka hakodian’ny olona ny vato hiala amin’ny vavan’ny lavaka fantsakana; dia vao hampisotro ny ondry aman’osy izahay. Baibolh efa-polo no ho hita ao.
Zanak’i Betoela, zanakalahin’i Nahora, aho, izay naterak’i Milka taminy. Hemdana sy Esbana sy Pdg ary Kerana. Inona no soa ho azontsika, raha hamono ny rahalahintsika sy hanafina ny ràny isika? Efa nampihomehezin’Andriamanitra aho; izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko. Rehefa zato taona Sema, dia niteraka an’i Arpaksada izy roa taona taorian’ny safo-drano.
Chapitre 7 1 Ary hoy Jehovah tamin’i Noa: Efa lasan’i Jakoba avokoa izay rehetra nananan’ny raintsika; ary avy tamin’ny fananan’ny raintsika no nahazoany izao voninahitra rehetra izao.
Ireo valo ireo no naterak’i Milka tamin’i Nahora, rahalahin’i Abrahama. baibloy
Ity no niseho voalohany. Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy. Aza maninjitra ny tananao amin’ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao; fa hitako izao fa matahotra an’Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahitokanao. Olo-marina izahay, fa tsy mba mpisafo tsy akory; 32 roa ambin’ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay; tsy ao intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin’ny rainay any pdv tany Kanana ankehitriny.
Ary Jehovah nanao famantarana ho an’i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy. Chapitre 19 1 [Ny nandravan’Andriamanitra an’i Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an’i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin’i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin’ny tany.
Fa hoy kosa Jakoba: Indro, ao an-day izy. Izao no holazainareo amin’i Esao tompoko: Ppdf nivahiny tany amin’i Labana aho ka baiiboly tany mandraka ankehitriny; pff ary manana omby sy boriky sy ondry aman’osy ary andevolahy aho; dia efa mba naniraka hanambara aminao tompokolahy ihany aho mba hahitako fitia eo imasonao.
Ny sampany telo dia hateloana. Nahoana no nihomehy Saraha ka nanao hoe: Tsaroako izao ny baiboyl Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Izany no nanaovana ny anaran’ny tanàna hoe Zoara.
Tafahaona tamin’i Esao rahalahinao izahay, ary izy koa dia avy hitsena anao mitondra olona efa-jato lahy. Fahatsorana sy fahalebiazan ny Fanambaràna avy any an-danitra Raha hanontaniana mikasika heviteny sasantsasany izy ireo dia amin’ireo milaza fa mino ny Baiboly no tsy voaaron’ny fakam-panahy amin’io lafiny io. Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa baibolh ny alehako; alefaso aho mba hankany amin’ny tompoko. Aza an’izany, Tompo ô! Izao ary no hahafantarako fa olo-marina ianareo: Trarantitra ianao, aza an’izany; raha mba mahita fitia eto imasonao aho, dia raiso amin’ny tanako ny zavatra nampanateriko; fa efa nahita ny tavanao aho tahaka pvf mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho.
Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah aho. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egypta.
Alefaso aho hankany amin’ny fonenako sy ny taniko. Tsy nisy vehivavy janga teo.